Madaxda Maamullada Gobolka Gedo iyo Kan Mandheera Ee Kenya Oo ka Wada Shiray Arimaha Amniga Xadka.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Madaxda Maamullada Gobolka Gedo iyo Kan Mandheera Ee Kenya Oo ka Wada Shiray Arimaha Amniga Xadka.(Sawiro)
Kulankan oo ka dhacay magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxaa uu u dhexeeyay wafdi uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Gedo, oo ka koobnaa taliyaha nabadsugidda gobolkaasi, masuuliyiinta maamullada degmooyinka Doolow, Baladxaawo iyo Luuq iyo masuuliyiinta maamulka Mandheera oo uu horkacayay gudoomiyaha Mandheera.
Kulanka ayaa ka danbeeyay ayadoo mudooyinkii u danbeeyay ay istaageen isu socodka magaalada Mandheera iyo degmooyinka gobolka Gedo, oo xilliyadii hore uu ka dhexeeyay isu socod dhinacyada ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka.
Dowladda Kenya ayaa gabi ahaanba xirtay soohdintii ay la wadaagtay Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolka Gedo, taa oo keentay in maamulka gobolkaasi uu hakiyo ganacsigii Qaadka ee ka iman jiray Kenya.
Kulanka ay masuuliyiintu wada qaateen ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta u aqriyay waxyaalihii laga wada hadlay madaxda labada dhinac.
Gudoomiyaha Mandheera Cali Rooba ayaa sheegay in Wafdigii uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Gedo ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa nabadgelyada islamarkaana loo xallin lahaa dhibaaatooyin yar yar oo uu sheegay in ay jireen.
“Waxaan kaloo ka wada hadalnay, arimo ku saabsan isdhexgalka bulshada, sida ganacsiga, waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka, marka wadahal fiican baan sameeysannay, waxyaalo ayaan is tusnay, waxaanna isku afgarannay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada gobol,” ayuu gudoomiyuhu hadalkiisii raaciyay.
Gudoomiyaha oo la weeydiiyay in waxyaalaha ay ka wada hadleen ay kamid tahay in dib loo furo soohdinta ay magaalada Mandheera la wadaagto gobolka Gedo ayaa sheegay in arimaha la xiriira soohdimaha ay u taal madaxda labada dal, balse ay iyagu ka wada hadleen waxyaalaha keenay in la xiro soohdinta iyo waxa ay ka qaban karaan, isagoo xusay in tallaabada labaad ay noqon doonto in la furo Xuduudda.
Gudoomiyaha gobolka Gedo Max’ed Muxumed Max’ed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxda Mandheera ay ka wada hadleen sidii loo dhameyn lahaa waxyaalaha dhibaatada ku keeni kara nabadgelyada.
“Mandheera iyo Baladxaawo dadka wada dega waa dad walaalo ah, oo is leh, oo waxyaalo badan wadaaga, waxaan ka hadalnay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada maamul ee dhinaca ammaanka,” ayuu gudoomiyuhu hadalkiisii raaciyay.
Mudooyinkii u danbeeyay qaar kamid ah magaalooyinka gobolka Gedo waxaa ka socday olole ka dhan ah Qaadka ka yimaada Kenya, arrintaa oo timid kadib markii ay Kenya xirtay Soohdinta dhanka magaalada Baladxaawo, taa oo culeys ku keentay dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee dhinacyada ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka.